Jooji Hadalka Oo Dhageyso | Martech Zone
Talaado, Janaayo 29, 2013 Talaado, Janaayo 29, 2013 Ryan smith
Baraha bulshada waa bulshada. Dhamaanteen waan maqalnay taas milyan jeer. Sababta aan dhammaanteen u maqalnay tan milyan jeer waa sababta oo ah waa xukunka keliya ee joogtada ah ee qof walba lagu caddeyn karo baraha bulshada.
Dhibaatada ugu weyn ee aan u arko si joogto ah waa in dadku ay la hadlayaan kuwa raacsan halkii ay ka hadli lahaayeen la iyaga.
Dhawaan, waxaan ka helnay cabasho macaamiil ah Twitter ku saabsan mid ka mid ah macaamiisheenna. In kasta oo cabashadu dhab ahaan aan loo jeedin macmiilka, haddana waxaan go'aansanay in habka ugu wanaagsan uu noqon doono ka jawaab celinta oo aan tusno inaan dhegeysaneyno macaamiisheenna, isla markaana aan halkan u joogno inaan caawinno.
Macaamiilku wuxuu ku jawaabay in qirashadeenna isaga ay ahayd magdhowgii ashtakada asalka ah. Marka si dib loogu soo cesho, macmiil ayaa cabasho qabay oo wuxuu uga dhawaajiyay Twitter. Macaamiilkeennu wuu ka jawaabaa oo wuxuu u fidiyaa si uu u caawiyo, macmiilkuna wuxuu tixgeliyey dalabku inuu ku filan yahay inuu ilaaliyo daacadnimadooda
Tani waa waxa ay baraha bulshada ku saabsan yihiin. Halkii aad ka abuuri lahayd waxyaabo si fudud ula hadlaya kuwa raacsan, waqti ku bixi dhageysiga iyo la macaamil wada hadallada horay uga dhacayay khadka tooska ah. Tani waxay dib ugu laabanaysaa qodobkii asalka ahaa ee ahaa in baraha bulshada ay tahay mid bulsheed.
Qofna ma jecla ninka aan waxba qaban karin, laakiin ka hadal naftiisa iyo wuxuu sameeyo. Waqti qaado si aad u dhageysato, kuna biir wadahadalka adiga oo aan daruuri u aheyn kor u qaadida wax ay meheradaadu qabaneyso
Siduu Ernest Hemingway mar u yiri, “Waxaan jeclahay inaan dhageysto. Wax badan ayaan ka bartay dhageysiga si taxaddar leh. Dadka badankood waligood ma dhageystaan. ”
Tags: dhagaysanwarbaahinta bulshadaMedia Social Suuqhadalka
Infochimps: Khubaradaada Qalabka Xogta Weyn
Inbadan waan heshiin kari waayey
kula jooga. U adeegsiga warbaahinta bulshada adeeg macmiil ma aha oo kaliya edeb badan iyo
macmiil u ah macaamiishaada, laakiin waxay sidoo kale abuuri kartaa taraafiko aad u tiro badan,
wacyigelinta sumcadda iyo haddii si sax ah loo sameeyo iyo qaab qosol leh, waxay ku noqon kartaa fayras taasina waa wax aan qiimo lahayn.
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan arki karnaa tusaale weyn oo ay sameysay Bodyform iyadoo laga jawaabayo
Richard Neill. Waxyaabahani waa kuwo fiican oo magacyadu waa inay diiradda saaraan taas. Dhageysiga ayaa fure u ah wax walba.